DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo u Ambabaxay Dalka Uganda – XAMAR POST
DEG DEG: Madaxweyne Farmaajo oo u Ambabaxay Dalka Uganda
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed oo ay wehliyaan Saraakiil Ciidan iyo Xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ayaa maanta u Amba-baxay Magaakada Kampala ee Xarunta dalka Uganda halkaasi uu kula soo kulmi doono Madaxweynaha Wadankaasi.
Socdaalka Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu salka ku haayo sidii uu taageero ugu Raadin lahaa Howlgal Military oo ka bilaawda Soomaaliya si Al-Shabaab looga saaro Gobalada ay ka joogaan Soomaaliya.
Farmaajo ayaa la kulmi doono dhiggiisa Uganda waxa uuna ka dalban doonaa in ay dhaqaaqaan Ciidanka ka jooga Soomaaliya oo ay ka qeyb qaataan soo afjarida Al-Shabaab kadib Bamkii lagu dhamaaday ee ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa Safarkiisa Uganda kadib waxa uu usii gudbi doonaa Dalalka Jabuuti iyo Ethiopia oo sidoo kale ka dalban doono in Dowladiisa lagu taageero Dagaal ay ku qaado Al-Shabaab.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isku dayaya in Dowladiisa ay jawaab celiso Masiibadii ka dhacday Soomaaliya 14-kii Bishaan oo galaafatay Nolasha Boqolaal dad oo kala bar Hilibkooda la waayay lkn waxaa hor taagan Caqabado gudaha iyo Dibadda ah.
Ciidamada AMISOM ee Ku sugan Soomaaliya ayaan ka amar qaadan Madaxda Qaranka waxaana la sheegay in ay ka amar qaataan Madaxda Wadamda ay ka soo jeedaan waana Sababta keentay in Madaxweynaha uu Safar ku tago wadamda Dariska oo ay Soomaaliya Ciidanka ka joogaan.
Sidoo kale Warar Madax banaan ayaa sheegaya Xubno ka tirsan Golaha Shacabka ay kor yimaadeyn Kulan uu madaxweynaha la qaadan lahaa Labada Gole ee baarlamaanka kulankaasi uu madaxweynaha Taageero taageero iyo garab istaag ugu raadinayay golayaasha Baarlamaanka.
Xuno ka tirsan Golaha Shacabka ayaa xaqiijiyay In xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ay diyaarsadeen Maryo gaduudan oo ay madaxda ku xertaan iyo firinbiyo la sheegay in Fowdo looga dhax sameyn lahaa Kulanka Baarlamaanka uu madaxweynaha ku hor imaan lahaa Taasina ay keentay in kulanka uu dib u dhaco.
Sidoo kale Madaxda Maamul Gobaleedyada ayaa la sheegay in ay ka soo hor jeesten Howlgal ka bilaawda Soomaaliya ilaa inta laga Xaliyo cabashada ay qabaan halka madaxda qaranka iyo Xubno kalane ay qabaan in aysan Jirin Sabab dib loogu dhigo Howlgal ka Bilawda Soomaaliya.